पत्रकार महासंघ मतगणना जारी : कुन जिल्लामा को अगाडी ? - Rastrakokhabar
पत्रकार महासंघ मतगणना जारी : कुन जिल्लामा को अगाडी ?
२६ चैत्र २०७७, बिहीबार १०:२९
काठमाडौं, २६ चैत । नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि पहिलोपटक भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनको मतगणना जारी छ ।
Previous Post	राष्ट्रिय जनगणनामा पहिलोपटक वित्तीय पहुँच र ऋण खाताबारे विवरण सङ्कलन गरिँदै